अड्डा, ओवन मा सुखा, र अन्य माछा
सुखा माछा ओवन मा, को पाठ्यक्रम, आफ्नो सबै स्वाद पनि कायम रहन्छ र लाभदायी गुण तला वा पकाएको भन्दा राम्रो हो। साथै, तपाईंले स्टोभ मा खडा र माछा बारी छैन। म बास, आक्षेप र pelegas जस्ता प्रजाति लागि केही ठूलो व्यञ्जनहरु तपाईं परिचय गर्न चाहनुहुन्छ किन छ।
अड्डा, ओवन मा सुखा
तपाईंले यो माछा तयार गर्न आवश्यक हुनेछ:
ठूलो अड्डा - केही टुक्रा;
प्याज -3पीसी;।
लेमन - 1 पीसी;।
पहिलो हामी माछा सफा गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि यो राम्ररी र सुक्खा कुल्ला। टाउको र पुच्छर पनि कटौती गर्नुपर्छ। तरकारी र माछा मा राखे संग त्यसको oiled पाक पाना, पूर्व-नुनीन र स्वाद peppered। छुट्टै कचौरा मा कागति को रस squeeze र प्रत्येक माछा संग छिडकना। प्याज आधा-छल्ले काट्नु र माछा धारण यसलाई पूर्ण उनको लुकेको भनेर। सूक्ष्मता को मशरूम काट्नु र अड्डा को शीर्ष मा छिडकना। यो पहाडी तपाईं ओवन (200 डिग्री) मा मेयोनेज र स्थान संग चिल्लो को एक बिट आवश्यक छ। बीस मिनेट पछि, तपाईं खाना पकाउने समयमा जारी गरिने माछा को रस, खन्याउन गर्न आवश्यक छ। माछा मशरूम तत्परता व्यञ्जन भन्दा छिटो पकाउन देखि मशरूम को उपलब्धता निर्धारण गरिन्छ।
अड्डा, ओवन मा सुखा, यो धेरै, रसदार स्वादिष्ट र स्वस्थ बाहिर जान्छ। माछा मासु र मशरूम को उत्कृष्ट संयोजन गर्न धन्यवाद, उहाँले उत्कृष्ट स्वाद छ!
Crucian आक्षेप, ओवन मा सुखा
यो पकवान लागि एक ठूलो आकारको आक्षेप प्रयोग गर्न आवश्यक छ। तपाईं पनि यस्तो आक्षेप रूपमा लिन र गर्न सक्छन् अन्य माछा। खाना पकाउने लागि सामाग्री:
कारास - 1.2 किलो;
Cilantro - 1 गुच्छा;
नुन, माछा लागि मसला
सुरु गर्न, माछा लिन र तराजू र innards को यो खाली गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईं राम्रो तरिकाले सबै पक्षलाई पानी र नुन चलिरहेको अन्तर्गत यो कुल्ला। कि पछि, छिडकना मसला माछा लागि भित्र र तिनीहरूलाई राम्ररी सतह आक्षेप RUB। भित्र साग राख्नु र सजावट लागि केही छोड्नुहोस्। हामी एक पाक पानामा पन्नी राख्नु र यसमा माछा राख्न, र त्यसपछि एक सानो तेल खन्याउन। आधा एक घण्टा ओवन मा राखे। तपाईं ग्रिल मोड, एक सानो छिटो पकवान तयार गर्न मदत गर्नेछ जो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आधा एक घण्टा पछि हामी पन्नी मा माछा राख्नु र थप घण्टा एक तत्परता गर्न ल्याउन।
त्यसपछि हामी ओवन बाहिर लिन र टेबल मा सेवा, जडीबुटी संग छिडकना। Crucian आक्षेप, साथै अड्डा, ओवन मा सुखा, यो धेरै रसदार र पौष्टिक बाहिर जान्छ।
Mullet, ओवन मा सुखा
Pelengas - 1.3 किलो;
धनु - केही टुक्रा;
अमिलो - 150 एमएल;
माछा लागि मसला स्वाद -;
नुन र मरिच;
तपाईं यो माछा को तयारी को लागि मसला र नुन RUB गर्न त माछा, portioned स्लाइस, को ट्रंक मा सुरुमा कटौती गर्न तिनीहरूलाई प्रत्येक आवश्यक हुनेछ। अब एक हत्येदार बरतन मा बदलाव र आधा एक घण्टा खटाई मा हालन गर्न छोड्न माछा। प्याज धुने, बोक्रा र पातलो छल्ले मा कटौती। त्यसपछि पट मा बदलाव र नुन संग छिडकना। अब यो पनि खट्टा क्रीम खन्याउन मसला संग छिडकना र राम्ररी हलचल आवश्यक छ।
अब माछा सुखा जो गरिनेछ, र छेक्दैन यसको पन्नी वा पैन, लिन चर्मपत्र कागज। शीर्ष मा माछा को टुक्रा राख्नु र तिनीहरूलाई खट्टा क्रीम र प्याज मसला मा marinated खन्याउन। यो तपाईं खट्टा क्रीम र दही मा प्याज खटाई मा हालन गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुपर्छ।
कि पछि, हामी एक preheated 190 डिग्री ओवन पकवान मा माछा पाक राख्नु र लगभग 50 मिनेट को पाक्नु छोड्नुहोस्। यो समय पछि, mullet ओवन हटाइएको हुनुपर्छ, greenery संग सजाउनु। यो तातो पिउन सिफारिस गरिएको छ। एक पक्ष पकवान रूपमा, आलु वा तरकारी प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, अड्डा, ओवन मा सुखा र माछा को अन्य प्रकार धेरै सजिलै र चाँडै तयार पारे। र माछा मासु खाना पकाउने यो विधि धन्यवाद हाम्रो शरीर त आवश्यक हो कि सबै लाभदायक गुण पनि कायम रहन्छ। त्यसैले तपाईं सुरक्षित समय बचत गर्न मद्दत र अतिथि स्वादिष्ट स्वाद खुसी पार्न हुनेछ जो redfish, ओवन मा pelengasa वा आक्षेप को तैयारी, गर्न अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ!
ओवन मा पाठो एक खुट्टा कसरी भुना?
कति चाँडो मटर खाना पकाउनु? सुझाव
सिमी को Meatless भोजन
तातार व्यञ्जन: सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जनहरु
सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जनहरु: को coals मा पन्नी मा आलु। को coals मा पन्नी मा बेकन संग आलु
स्वचालित पार्किंग - स्थलीय Parkings कार ठूलो वैकल्पिक।
मृत्यु पछि मानिसहरूसँग के हुन्छ भन्ने मुख्य मुख्य संस्करण
फुलेको नसाहरु को Antivarikoznye क्रीम क्रीम: समीक्षा
मौरी रोटी: उपयोगी गुण र आवेदन
लक्षण र उपचार: फिर्ता को मांसपेशिहरु को सुनिंनु
को टखने मा दुखाइ: सम्भव कारण र उपायहरु
लियो टोलस्टोय - "बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवा।" सारांश
अन्डा itches? डाक्टर जाने!